Imise lacag ah ayuu Paul Pogba ku iibiyey Kabihii uu ku ciyaaray kulankii kama dambeysta ahaa ee Final-kii Koobkii Adduunka 2018? – Gool FM
(Manchester) 30 Abriil 2019. Xiddiga xulka qaranka Faransiiska iyo kooxda Manchester United ee Paul Pogba ayaa iibiyay Kabihii uu ku ciyaaray kulankii kama dambeysta ahaa ee Koobkii Adduunka 2018 ee Faransiisku uu ku guuleystay markii uu 4-2 kaga badiyay Croatia, isla markaana Pogba uu kabahaasi ku dhaliyay mid ka mid ah goolashaasi.
Kabahan oo lagu soo bandhigay suuqa xaraashka ee Magaalada Paris ayaa waxaa lagu iibsaday 30,000 oo Euro oo u dhiganta 33,540 oo dollar, waxaana lacagtan iyo lacago kale oo badan oo lagu gaday funaanado iyo Kabo kale oo uu ciyaaro hore ku ciyaaray laacibkan toos loogu wareejiyay hay’adda Faransiiska ee samafalka, taas oo dhaqaalahan ku caawin doonta carruurta dugsiyada sare ee ku nool meelaha nolosha adagi ka jirto.
Sidoo kale waxaa la iibsaday funaanado kale oo uu Pogba horey ugu soo ciyaaray sida maaliyaddii uu xirnaa kulankii nus dhammaadka Koobkii Qarammada Yurub ee 2016-kii, taasoo Faransiisku guuleystay, waxaana funaanaddaa lagu gatay 4,000 oo Euro.
Funaanad kale oo uu Pogba kaga qayb galay ciyaartii Holland ee isreeb-reebkii Koobka Adduunka ee la dheelay sanadkii 2017-kii ayaa waxaa lagu iibsaday 3,000 oo Euro.
Waxaa iyana jirtay in funaanad kale oo uu Manchester United ugu dheelay lagu iibsaday 400 oo Euro, halka maaliyado kale oo badan oo lagu soo bandhigay suuqa Christie’s Auction dhammaantood la wada iibsaday.
Shaxda rasmiga ah kulanka Champions League caawa ee kooxaha Tottenham iyo Ajax oo la shaaciyey